Imveliso yelaphu yaseChina kunye neFektri | Jiashun
Imisonto yentsontelo kunye ne-weft zihambelana ngokuhambelana nemilo ethe tyaba, kunye noxinzelelo olufanayo, uxinizelelo oluphezulu lwelungiselelo lefayibha, akukho lula ukuba likhubazeke, kulula ukusebenza, ukulunga kwepropathi yefilimu kunye namandla aphezulu oomatshini
Ubushushu ubushushu, ukuthintela umlilo, nekudodobalisa idangatye. Xa izinto zitshiswa lilangatye, linokufunxa ubushushu obuninzi, lithintele idangatye ekubeni lidlule lize lihlukanise umoya. Inkqubo yokubeka isandla isetyenziswa ikakhulu kumziba wenqanawa, itanki yokugcina, ukupholisa inqaba, inqanawa, isithuthi, itanki njalo njalo: 7518 3732 3784 3786 3788 666 255
I-Q1: Ngaba ungumzi-mveliso? Ufumaneka phi?
A: singumvelisi. ibekwe e Jiangsu, kufutshane nezibuko Shanghai.
I-Q2: Yintoni i-MOQ?
A: Ngokwesiqhelo itoni enye, kodwa iodolo encinci nayo inokwamkelwa.
I-Q3: Iphakheji kunye nokuHanjiswa.
A: Iphakheji yesiqhelo: ibhokisi (efakwe kwixabiso lokudibanisa)
Ipakethe ekhethekileyo: kufuneka ubize ngokwemeko eyiyo.
Ukuthunyelwa okuqhelekileyo: ukuhambisa phambili ukuThutha iimpahla.
Q4: Ndinganikela nini?
A: Sihlala sicaphula kwiiyure ezingama-24 emva kokuba sifumene umbuzo wakho. Ukuba ungxamise kakhulu ukufumana amaxabiso pls usitsalele umnxeba okanye usixelele nge-imeyile yakho, ukuze sikwazi ukukuphendula kuqala.
I-Q5: Uhlawulisa njani imali yesampulu?
A: Ukuba ufuna iisampulu kwisitokhwe sethu, singakunika simahla, kodwa kuya kufuneka uhlawule intlawulelo-mthwalo ukuba ufuna ubungakanani obukhethekileyo, Siya kubiza intlawulo yokwenza isampuli ebuyiswayo xa ufaka iodolo .
Q6: Leliphi ixesha lokuhambisa?
A: Ukuba sinesitokhwe, ngaba ukuhanjiswa ngeentsuku ezi-7; ukuba ngaphandle kwesitokhwe, kufuneka iintsuku ezi-7 ~ 15!
Egqithileyo Ilaphu elektroniki
Okulandelayo: DB Camera amalaphu